Howshii Garoonka Diyaaradaha Muqdisho,oo isbadelo jiraan xilli shaqaaqo… – XAMAR POST
Wafdi ka socda DFS oo ka qeyb galay shirka Jaamacada Carabta
WHO oo sheegtay inuu sare u kacay cudurka malaariyada
Abiy Ahmed oo ku hanjabay inuu cagta marinayo kooxda TPLF
Ciidamada Itoobiya oo TPLF kala wareegay laba magaalo
Mareykanka iyo Dowladdo dhowr ah oo Taalibaan ugu baaqay iney joojiso dilalka qorsheysan.
Guddiga FIET oo waxba ku tilmaamay Doorashada laba kursi
Shiinaha oo Saldhig Militari ka sameysanaya dalka Gani.
Weerar dad badani ku waxyeeloobeen oo ka dhacay dalka Mali.
Hay’adda Lacagta Adduunka oo ka digtay hoos u dhac dhaqaale ee uu keeni karo Feyruska Omicron
Madaxweynaha Puntland oo kormeer ku tegay xarunta Taliska Ciidanka Booliska “SAWIRRO”
Howshii Garoonka Diyaaradaha Muqdisho,oo isbadelo jiraan xilli shaqaaqo…
By Mohamed Abdi On Apr 25, 2021
Wasaarada Amniga Gudaha Soomaaliya ayaa Guddi u saartay shaqaaqo Khamiistii ka dhacday Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
War ka soo baxay Wasiirka Amniga Gudaha Xasan Xundubeey Jimcaale ayaa lagu cadeeyey in guddigan ay baaris iyo xaqiiqo raadin ku sameyn doonaan dhacdadii ka dhacday Garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Afar qofood ayuu ka kooban yahay Guddigaan waxaana Gudoomiye looga dhigay Maareeyaha Hay’ada Duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macallin Xasan.
Sidoo kale Xubnaha ku jira Guddigaan ayaa kala ah:
Cabdi Aadan Xuseen
Gaashaanle Dhexe Ciise Maxamed Ciise
Dhamme Maxamed Cali Maxamed
Madaarka Caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa 22 kii bishan waxa ka dhacay gacan ka hadal u dheexeeyay shaqaalaha laanta socdaalka iyo ciidamada Nabad-Sugidda.
Falkaasi oo aan rasaas la isku adeegsan ayaa wuxuu mudda kooban hakiyay shaqadii waaxda socdaalka ee garoonka, iyadoo muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada uu muujinayay burburka muraayado qeybta ay ka soo degaan diyaaradaha caalamiga ah ee garoonka.
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa sheegay in wax saameyn ah ku yeelan howshii Garoonka shaqaaqadii dhawaan islamarkaana Diyaaradaha ay si caadi ah usoo degayaan una dhoofayaan.
Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya Xasan Xundubeey Jimcaale ayaa cod dheer ku sheegay inaan la aqbali doonin tii khamiistii dhacday oo kale inay soo laabato,xilli baaritaan lagu bilaabay shakhsiyaadkii falkaasi ku lugta lahaa.
15 Qof oo ku dhintay Cusbitaal dad qaba covid 19 dab qabsaday
Dhaq dhaqaaqyo ciidan iska soo horjeeda oo laga dareemayo Muqdisho
Mohamed Abdi Dec 7, 2021
Mareykanka iyo Dowladdo dhowr ah oo Taalibaan ugu baaqay iney joojiso…
Hay’adda Lacagta Adduunka oo ka digtay hoos u dhac dhaqaale ee uu…
Madaxweynaha Puntland oo kormeer ku tegay xarunta Taliska Ciidanka…
Midowga Musharixiinta oo muqdisho ku leh shir wajigiisa 2-aad ah.
Puntland war kasoo baxay oo lagu hakiyay Gaadiidka Galaya Magaalada…
Taliban oo ka hadashay dagaal ay la galeen ciidamada Iran
Soomaaliya oo safiir Cusub u magacowday Ruushka, iyo Putin oo la kulmay
QM oo sheegtay in gargaarkii ugu horeeyay lagaarsiiyay G.Tigreey.
Cumar Cabdirashiid oo si kulul ugu hadlay sida ay u socdaan doorashooyinka
Guddiga doorashada Gobolladda waqooyi oo shaaca ka qaaday qabashada Doorashada16…
Ciidamada itoobiya oo qabsanaya deegaano muhiim u ah TPLF.
Madaxweyne Lafta-gareen oo kulan la yeeshay Guddiyada…
Ra’iisul Wasaare Rooble oo Shir guddoomiyay kulanka Golaha…